Yohimbe hodi-kazo nalaina
St John ny wort nalaina
Organic Propolis vovoka
Lyophilized mpanjaka Jelly vovoka
[Latina Name] Huperzia serratum [Source] Huperziceae rehetra ahitra avy any Shina [endrika] Brown ho fotsy [Zavatra ilaina] Huperzine A [famaritana] Huperzine A 1% - 5%, HPLC [Solubility] mety levona anaty chloroform, methanol, ethanol, kely mety levona amin'ny rano [sombiny habeny] 80 harato [fatiantoka paharitry] ≤5.0% [Heavy Metal] ≤10PPM [fanafody famonoana bibikely sisa] EC396-2005, USP 34, EP 8,0, FDA [Storage] Store amin'ny faritra maina sy mangatsiatsiaka, alavironareo ny hazavana sy ny hafanana mivantana. [Talantalana fiainana] 24 Volana [Package] Nafatratra in ...
Min.Order Quantity: 100 Mp
Supply Fahaizana: 10000 Mp isam-bolana
[Latina Name] Huperzia serratum
[Source] Huperziceae anana rehetra avy any Shina
[Bika Aman 'endrika] Brown ho fotsy
[Zavatra ilaina] Huperzine A
[Famaritana]Huperzine A 1% - 5%, HPLC
[Solubility] mety levona anaty chloroform, methanol, ethanol, kely mety levona anaty rano
[Sombiny habeny] 80 harato
[Fatiantoka paharitry] ≤5.0%
[Fanafody famonoana bibikely sisa] EC396-2005, USP 34, EP 8,0, FDA
[Storage] Store amin'ny faritra maina sy mangatsiatsiaka, Mitandrema ny amin'ny hazavana sy ny hafanana mivantana.
[Talantalana fiainana] 24 Volana
[Package] Nafatratra amin'ny taratasy-amponga sy roa harona plastika-anatiny.
[Inona no atao hoe Huperzine A]
Huperzia dia tandindon 'moss izay maniry any Shina. Tsy mifandray ny fikambanana mosses (ny Lycopodiaceae fianakaviana) ary fantatry ny sasany ho Lycopodium bôtanista serratum. Ary ny olona rehetra voaomana moss nampiasaina fomban-drazana. Modern raokandro fanomanana mampiasa afa-tsy ny mitokana alkaloid fantatra amin'ny anarana hoe huperzine A. Huperzine A dia alkaloid huperzia hita ao amin'ny tatitra fa efa mba hisorohana ny fahalavoan'ny acetylcholine, fananana zava-dehibe ilaina ny rafi-pitatitra mampita vaovao avy amin'ny efitra ny sela. Animal fikarohana dia milaza fa huperzine A mahay miaro acetylcholine Mety ho lehibe noho ny an'ny sasany levitra zava-mahadomelina. Fahaverezan'ny asa acetylcholine no zavatra voalohany tsy endri-javatra maro ny atidoha aretina ny asa, anisan'izany ny aretin'i Alzheimer. Huperzine A dia mety hisy ihany koa ny fiantraikany eo amin'ny atidoha miaro sela, vao mainka mitombo ny teorika mety noho ny fanampiany hampihenana soritr'aretina sasany atidoha aretina.
[Andraikitra] nampiasaina tamin'ny fitsaboana hafa, huperzine A dia hita hanao toy ny cholinesterase inhibitor, karazana fanafody ampiasaina mba hisorohana ny fahalavoan'ny acetylcholine (a simika tena ilaina ny fianarana sy ny fitadidiana).
Tsy vitan'ny ampiasaina ho toy ny fitsaboana ho an'ny aretina Alzheimer, huperzine A ihany koa hoy hanatsarana ny fianarana sy ny fahatsiarovana sy mba hiarovana manohitra mandrakizay mifandray amin'ny fitontonganan'ny fandroson'ny ara-pahalalana.
Ankoatra izany, huperzine A dia ampiasaina indraindray mba hampitombo hery, hampitombo mailo, ary hanampy amin'ny fitsaboana ny myasthenia gravis (iray autoimmune fikorontanana fa misy fiantraikany ny hozatra).
Previous: Green dite nalaina
Next: Kava hanesorana
Red clover nalaina
Sodium varahina chlorophyllin
Sakamalaho Root hanesorana
© Copyright - 2016-2017: All Rights Reserved. - Power ny Globalso.com